Maxay tahay faa’idada dhaqaale ee ay heli doonaan kooxaha ka qayb noqday European Super League?… (& Champions League oo…) – Gool FM
Maxay tahay faa’idada dhaqaale ee ay heli doonaan kooxaha ka qayb noqday European Super League?… (& Champions League oo…)
Ahmed Nur April 19, 2021
(Yurub) 19 Abril 2021. Kubadda cagta ayaa maanta guuxeysa kaddib markii xalay lagu dhowaaqay tartanka cusub ee European Super League, waxaana qoraalkan kooban ku eegeynaa dhaqaalaha ay kooxaha tartankan ciyaaraya heli doonaan iyo inta jeer ee uu ku jibaarmo dhaqaalihii ay Champions League ka heli jireen.
Bankiga Ameerikaanka ah ee JP Morgan ayaa diyaar u ah inuu dhaqaale ku qalabeeyo tartankan cusub, waxaana kooxaha European Super League ciyaaraya ay heli doonaan 3.5 bilyan oo euro bilawga hore ee tartanka.
Balse sida caadiga ah, waxaa kooxda hanata European Super League ay heli doontaa lacag ku dhow 400 milyan oo euro, halka kooxda ku guuleysata Champions League ay UEFA ka hesho 120 milyan oo euro.
Waxaa xusid mudan in Barcelona oo gaartay kaliya afar-dhammaadka Champions League ay sanadkii 2019 heshay 117 milyan oo euro, waana lacag ku dhow kooxda tartanka horyaallada Yurub ku guuleysata la siiyo.
Lacag gaareysa 1.95 oo ka mid ah lacagta soo hartay ayaa sidoo kale loo qeybin doonaa kooxaha tartanka ciyaaraya, waxaana 25% oo u dhiganta 488 milyan oo euro lagu bixin doonaa ka qayb galka tartanka halka 585 milyan oo euro ay ku xirnaan doonaan natiijooyinka kooxaha iyo heerarka ay gaaraan.
Sidoo kalena 30% ayaa kooxaha loogu qeybin doonaa qaabka kala sarreynta awoodaha ee ay kooxuhu tiigsadeen 10-kii sano ee lasoo dhaafay, taasoo ka dhigan in 292 milyan oo euro (oo 15% ka ah lacagtii guud ee 3.5 bilyan euro) lagu bixin doono gunnooyin yaryar.
Xogta lacagahan ma ahan mid si rasmi ah ay u shaaciyeen kooxaha ku mideysan tartanka European Super League, hase ahaatee, waxaa la filayaa inay ku dhowdahay saddex-jibbaar lacagihii kooxahan ay ka heli lahaayeen Champions League.
Dhanka kale kooxahan ayaa dhaqaale wacan ka rajeynaya xuquuqda TV-yada, waxaana la sii saadaalinayaa inay 10 bilyan oo euro ay ka heli doonaan xuquuqda baahinta TV-yada, halka UEFA ay sheegtay inay keliya afar milyan oo euro ka heshay xuquuqda TV-yada sanadkii 2020, waxaana qeybsaday kaliya xiriirrada hoos taga UEFA.
Maxaa ka jira in Tottenham ay u ceyrisay Mourinho sabab la xiriirta doodda European Super League?
UEFA oo go'aan kasoo saartay kooxaha ka qayb galaya Champions League iyo Europa League ee ka mid noqday aas-aaska tartanka cusub ee ESL... (Miyey PSG hanatay UCL?)